African Tourism Board "One Africa" ​​ikozvino yave neO Open Open kuEast Africa Community
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » African Tourism Bhodhi » African Tourism Board "One Africa" ​​ikozvino yave neO Open Open kuEast Africa Community
African Tourism Bhodhi • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Hurumende Nhau • Investments • nhau • vanhu • Kuvakazve • Tanzania Breaking News • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now • Wtn
African Tourism Board iri kubudirira muchinangwa chayo chekuunza nzvimbo dzekushanya muAfrica pamwechete nekusimudzira kondinendi kana matunhu ekondinendi senzvimbo imwe yekushanya.
Nyika dzemuEast Africa Nhengo dzava kushanda pamwechete kushambadzira kushanya senzira yekuratidzira kuratidzwa kwegore negore kwekuratidzira, vachida kukwidziridza huwandu hwevashanyi vanoshanyira dunhu iri mushure mekuparadzwa nedenda re COVID-19.
The African Tourism Bhodhi (ATB) vanga vatora chikamu mumusangano wekutanga wekushanyirwa kwenyika kumatunhu eEast Africa.
Sachigaro weATB VaCuthbert Ncube vaive vapa yekutanga East Africa Regional Tourism Expo (EARTE) yakapera svondo rapfuura mushure memazuva matatu ebhizinesi.
Cuthbert Ncube, sachigaro weATB akataura panguva yekuratidzira kuti East African Community (EAC) nhengo dzenyika vatora nhanho chaiyo kuenda kuchinangwa cheAfrican ajenda yekuona EAC sedanho rakabatana maoko munzira inosanganisirwa uye yakarongeka kusimudzira Tourism yeAfrica.
IEast African Community (EAC) isangano repasi rose rezvematongerwo enyika e6 Partner States: maRepublics eBurundi, Kenya, Rwanda, South Sudan, United Republic of Tanzania, neRepublic of Uganda, ine dzimbahwe rayo muArusha, Tanzania.
Vati ATB ichange ichishanda pamwe nenhengo dzeEEA kusimudzira kukurumidza kusimudzira kwekushanya kwematunhu mubhariki.
Mutungamiri weZanzibar Dr. Hussein Mwinyi anga avhura denda rekuparura musangano wepagore weEast Africa Regional Tourism Expo (EARTE) kuve inofambiswa pakati penhengo dzese dzedare reECC.
Dr. Mwinyi vakati nyika dzekudyidzana dzeEECC dzinofanirwa kutsanangudza nekudzokorora marongero anonotsa kusimudzira kwekushanya mudunhu kwezvigadzirwa nemasevhisi akafanana.
Kuvhurwa kweEARTE yegore negore kwaizovhura nzira nyowani kudunhu reEEC uye kuongorora nzira uye marongero matsva angashambadze dunhu senzvimbo imwe chete, akadaro Mwinyi.
Mhuka dzesango, zvakasikwa zvinosanganisira makomo, nyanza uye mahombekombe, zvisikwa, uye nzvimbo dzezvakaitika ndizvo zvinotungamira zvekushanya zvichikwevera vashanyi vekunze nedunhu kumatunhu eECC.
Kurambidzwa kwekufambisa uye vhiza kuburitswa, kushomeka kwekubatana pakati penzvimbo yeEEC kwave kudzora kusimudzira kwekushanya kwenzvimbo.
Nyika dzinodyidzana dzeEEC dzinofanira kudzokera kumabhodhi avo ekudhirowa kununura chikamu chezvekushanya nekukasira kupera kweEECC Protocol Yezvekushanya neWildlife Management, zvakare kusimbisa Kupatsanurwa kwenzvimbo dzekugara dzeVashanyi, nhengo dzeEast Africa Legislative Assembly ( EALA) akange ataura kuhurumende dzeEAC.
Kushaikwa kwenzvimbo dzakarongedzwa zvakanaka nedigitalized yekuchinjana ruzivo rwekuvandudza mavhiza evashanyi kwakakanganisa zvikuru budiriro yenharaunda, kunyanya panguva yedenda reCOVID-19.
Secretary General weEEC Dr. Peter Mathuki vakati vashanyi vekunze kwenyika mudunhu reEAC vanga vachikura zvakatsiga nemitengo yakasiana mudunhu rega rega. Yakanga ichisvika mamirioni 6.98 muna 2019 pasati patanga COVID-19 denda.
Huwandu hwevashanyi vanosvika mudunhu reEAC hwakange hwadzikira neanosvika 67.7 muzana gore rapfuura (2020) kusvika kungangoita mamirioni 2.25 evashanyi vekunze, vachirasikirwa nemadhora ekuAmerica 4.8 bhiriyoni kubva pamari dzevashanyi.
Dunhu re EAC rakange ratofungidzira kukwezva mamirioni gumi nemana evashanyi muna 14 denda reCOVID-2025 risati rasvika.
Kuvandudzwa kwenzvimbo dzakasiyana-siyana dzekushanyirwa uye mikana yekudyara kwekushanya uye zvinokurudzira, kurwisana nekuvhima nekutengesa zvisiri pamutemo kwemhuka dzesango dzaive nzira dzakakosha dzinodiwa mukuvandudza kwekushanya kwematunhu, Dr. Mathuki akadaro.
Kuputika kwe COVID-19 kwakanganisa zvakashata mabhenefiti ezvekushanya nemabasa makuru nemari, zvakare kwakakanganisa kuyedza kwekuchengetedza mhuka dzesango nekuda kwekudzikiswa kwemari inounganidzwa kubva kuvashanyi neNational Parks nenzvimbo dzenhaka.
Kurambidzwa kwekushanya kune vashanyi vanoyambuka miganhu yeEEC kwakakanganisa zvikuru kushambadzira kwemuganhu, zvotadzisa kufamba kwevashanyi vepasi rese nedunhu kupinda munyika dzakavakidzana, zvikuru Kenya neTanzania idzo dzinofarira zvakafanana.
Mukupindura kwekuputika kwedenda, EAC Secretariat yakagadzira chirongwa cheKutora Kudzoreredza chinotungamira dunhu mukutora kushanya kudzoka kumatanho epamberi pehosha.
Nyika dzekuEast Africa nhengo dzinogovana kushanya uye mhuka dzesango sezvinhu zvakajairika kuburikidza nekufamba-pamuganhu kufamba kwemhuka dzesango, vashanyi, vashanyi, vashanyi, uye varidzi vehotera.
Mount Kilimanjaro, Serengeti ecosystem, Mkomazi, uye Tsavo National Parks, Indian Ocean mahombekombe, chimpanzee uye gorilla mapaki muWestern Tanzania, Rwanda, neUganda ndiwo akakosha uye anotungamira enharaunda ekushanyirwa zviwanikwa zvakagovaniswa pakati penzvimbo dzeECA.
EAC Council yekushanyirwa nemakurukota emhuka dzesango dzakatsigira musi waChikunguru 15th gore rino, iyo EAC Dunhu Rekushanya Expo (EARTE) ichaitirwa nyika dzekudyidzana mukutenderera.
Tanzania yakasarudzwa kuitisa EARTE yekutanga nemusoro wenyaya we "Kukurudzira Kwekushanya Kwekushanya kweKubatanidzwa Kwehupfumi hwehupfumi." Expo yakavharwa kutanga kwesvondo rapfuura.